Wararka Maanta: Axad, Dec 30, 2012-Magacyada Tahriibayaashii Soomaaliyeed ee ku geeriyooday shilkii ka dhacay dalka Liibiya oo lasoo bandhigay
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya, C/qani Maxamed Wacays oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in magacyada dadka la helay aysan qaarkood ahayn kuwo dhameystiran, balse ay soo bandhigi doonaan sawirradii laga qaaday si ay waalidiintood u aqoonsadaan sawirrada.
Magacyada wiilasha geeriyooda oo ahaa 10-qof ayaa waxay kala yihiin: Cali Cabdulle Xirsi, Xasan Cismaan Jeylaani, Maxamed-deeq Barkhad Cali, C/raxiin, Askar, Muuse, Sugaal, Siciid, Axmed iyo Axmed Kheyr.
Sidoo kale, gabadhaha ku dhitay shilkan ayaa waxaa magacyadooda oo qaarkood lasoo gaabiyay ay kala yihiin, Sacdiyo Maxmuud Xasan, Aasiya Cusmaan maxamed, Dahabo, Xaawo, Saamiya, Yaasmiin iyo Xaawo.
Shilkan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu xumaa ee ka dhaca dalka Liibiya, iyadoo danjiruhu uu sheegay in dadka dhaawaca ah ay intooda badan yihiin kuwo fudud, dhammaantoodna lagu daweynayo isbitaallo ku yaalla dalka Liibiya.
Dhanka kale, danjiraha Soomaaliya ee dalka Liibiya wuxuu sheegay inay la socdeen dadka Soomaalida ah toddoba qof oo u dhashay dalka Ertirea, kuwaasoo laba ka mid ah ay ku dhinteen shilka, inta kalena ay dhaawacyo soo gaareen.
Maydadka dadkii ku dhintay shilka ee Soomaalida ahaa ayaa qaarkood shalay lagu aasay deegaankii uu shilku ka dhacay oo 150-km dhinaca bari ka xigta magaalada Tripoli ee ah caasimadda dalka Liibya.
Dalka Liibiya ayaa wuxuu marin u yahay tahriibayaasha Afrikaanka ah ee u tallaaba dalalka ku yaalla Koonfurta Qaaradda Yurub oo ay ka mid yihiin Talyaaniga iyo jasiiradda Malta, waxaana tahriibayaashaas u badan Soomaali.